प्रदेश सरकार गठनमा हुनलागेको समयमा भागबन्डा, विकास र समृद्धिको योजनालगायत विषयमा सुमनसँग कान्तिपुर संवाददाताले गरेको कुराकानी :
फोरम–राजपा वामठबन्धनको सरकार बन्दै छ । मन्त्रालय बाँडफाँड कसरी हुँदै छ ?
छलफल चलिहरको छ । पार्टीले जे जिम्मेवारी तोक्छ, म बहन गर्न तयार छु । निजी रूपमा भन्नुपर्दा म देशको प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने हैसियत राख्छु । जुनसुकै पद बहन गर्ने क्षमता मसँग छ । त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
फोरम राजपाबीच मन्त्रालयमा कुरानमिलेको हो ?
सम्बन्ध बिग्रिएको भए दुई पार्टीबीच सरकार बनाउने सहमति हुने थिएन । हामी एक थियौं र एक छौं । नेताहरू जे भने पनि राजपा र फोरमका कार्यकर्ताहरू पार्टी एकीकरण चाहेका छन् । आम मधेसी जनताले निर्वाचनका बेलामा दुई पार्टीलाई जनमत दिएको हो । त्यसकारणले जनताको आदेशअनुसार हामी एउटै गठबन्धनमा सरकार बनाउँछांै र यो सरकार पूर्णकाल चल्छ भने दाबी गर्न सक्छु । दीर्घकालीन रूपमा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकार चल्छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनेबारे दुई दलबीच छलफल गरी योजना बनाइनेछन् ।
राजपामाथि नातावाद हावी भएकोअरोप छ नि ?
हाम्रो पार्टीविरुद्ध गरिएको दुष्प्रचार हो यो । नाताले कोही कुनै नेताका नजिक पनि होलान् । राजपाले जात र नातावादभन्दा माथि उठेर योग्यता र क्षमताका आधारमा अवसर दिएको छ । फेरि कुनै शीर्ष नेताको सम्बन्धनले राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने छैन ।
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले यो प्रदेश केन्द्र सरकारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्र सरकारले अन्य ६ प्रदेशजस्तै प्रदेश २ लाई समेत विकासका लागि सहयोग गर्ने वातावरण बनाउँछभने केही समयपछि यो प्रदेश आफंै पनिसक्षम हुन्छ ।
समथल र उर्वर भूमि भएको यस प्रदेशमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । सिँचाइको सुविधा भए यहाँ वर्षमा ५ बाली सहजै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका साथै कृषि उद्योग, शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य पर्यटनको
यहाँ ठूलो सम्भावना छ । लहानको चौधरी आँखा अस्पतालमा मात्रै देश र विदेशका हजारौं बिरामी हरेक वर्ष उपचार गर्न आउँछन् । हामीसंँग योग्य चिकित्सक तथा अन्य सम्पूर्ण साधनस्रोत छन् । यस प्रदेशलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ ।
यो प्रदेशमा भाषा विवादबारे के भन्नुहुन्छ ?
यहाँको मातृभाषा मैथिली र भोजपुरीलगायत हुन् । हिन्दी सम्पर्क भाषा हो । राजपाले कुनै पनि भाषा, पोसाक वा संस्कृतिको विरोध गर्दैन । म मैथिली बोल्छु । मैथिलीमै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । तर हिन्दी सम्पर्क भाषा हो, यसलाई नकार्न सकिँदैन । पर्साबाट भोजपुरी र सप्तरीबाट मैथिलीमा वक्ताले बोल्दा एकअर्काले एक अर्कोको भाषा बुझेपनि फर्काउन वा आपसी संवाद गर्ने भाषा हिन्दी नै हो ।
तपार्इंको मुख्य मुद्दा के हो ?
संविधान निर्माण गर्दा विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको छ । चार जनाको सिन्डिकेटमा २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सम्झौतका आधारमा संविधान निर्माण भयो । त्यसैले हामी संविधानको विपक्षमा
थियौं र छांै ।
संविधानअनुसारको निर्वाचमा भाग लिएर प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ नि ?
संविधानसभाबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव विफल भएपछि हामी खेलको नियमअनुसार पराजयलाई स्वीकार गरी निर्वाचनमा आयांै । निर्वाचनमा आउनुको अर्थ संविधानलाई पूर्णत: स्वीकार गर्नुभन्दा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई टेकेर संविधान संशोधन तथा मधेसी जनताको अधिकारको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन हो ।
राजपा केन्द्रीय सरकामा सहभागी हुन्छ ?
प्रदेश २ का जनताले हामीलाई मधेसीको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा संविधान संशोधन गर्न जनादेश दिएका छन् । यी विषयलाई सम्बोधन गरियो भने सरकारमा जानेबारे सोच्न सकिन्छ ।
संविधानमा केके छुटेजस्तो लाग्छ ?
यो संविधान अपूरो छ । संविधानले प्रधानमन्त्री फेर्ने, प्रतिनिधि सभाको गठन पहिला कि प्रदेश सभाको गठन पहिलाजस्ता विषयहरू पनि छुटाएको छ । प्रदेश, स्थानीय तह तथा संघबीच अधिकारको विषयमा पनि अन्योल छ । संविधान सबैको हुन संशोधन अति आवश्यक छ । ‘देश मेरो हो । राज्य पनि मेरो हो’ भन्नका लागि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।